सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ, बागलुङ जिल्लाबाटै पहिलो पटक उच्च ओहदामा | MYAGDINEPAL
Home / राष्ट्रिय समाचार / समाचार / सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ, बागलुङ जिल्लाबाटै पहिलो पटक उच्च ओहदामा
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ, बागलुङ जिल्लाबाटै पहिलो पटक उच्च ओहदामा
सवोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठ विधिवत रुपमा प्रधान न्यायाधीशमा बहाली हुनुभएको छ । श्रेष्ठ सर्वोच्चका २० औं प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।
बागलुङ जिल्ला बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ४ पुरानो अदालतमा जन्मिएका श्रेष्ठले सदरमुकाममा रहेको विद्यामन्दिर उच्च मा.वि.मा कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्नुभएको थियो । बागलुङ जिल्लाबाट पहिलो पटक २०२५ सालमा एस.एल.सी. परिक्षामा उतिर्ण गरेका श्रेष्ठले उच्च शिक्षा भने काठमाडौंमा गर्नुभएको थियो ।
प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै २०३५ सालमा न्यायीक क्षेत्रमा प्रवेश गरी जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुने श्रेष्ठ बागलुङ जिल्लाकै पहिलो व्यक्ति हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयपछि राम्रो प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । विश्वनाथ उपाध्या पछि कल्याण श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पद्मनाथ शर्माले बताए । अदालतमा रहेका पुराना मुद्दा समेत श्रेष्ठको पालोमा किनारा लाग्ने शर्माले बताए ।
श्रेष्ठ बागलुङ जिल्लाबाट न्यायीक क्षेत्रमा प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बन्नु जिल्लाको लागि गौरवको विषय भएको समाजसेवी लालचन्द्र राजभण्डारीले बताए ।
न्याय क्षेत्र विकृती र विसंगती झाँगीएको बेला श्रेष्ठ बहाली भएपछि परिवर्तन हुने विश्वास जनताले राखेको साहित्यकार काजीरोशनले बताए । न्याय क्षेत्रमा केही मान्छेहरुले असहमती जनाइरहेको अवस्थामा उनीबाट न्याय क्षेत्रमा सुधार हुने विश्वास रहेको रोशनले बताए ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतमा नविनतम सोंच र विचार भएका व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश बन्नु राम्रो पक्ष भएको अधिवक्ता राम शर्माले बताए । उनको समयमा धेरै महत्वपूणै मुद्दाहरु छिटो छरितो रुपमा फास्ट ट्रयाक रुपमा फैसला भएको हुँदा अब उनको कार्यकालमा अझ बढी सुधार हुनेमा आशावादी रहेको शर्माले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा बागलुङ जिल्लाबाट श्रेष्ठ पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीश भएपछि बागलुङवासी खुसी छन् । उनको कार्यकालमा न्याय क्षेत्रमा भएका विकृती विसंगती हल भई जनताले तत्काल न्याय पाउने आशा गरेका छन् ।
पूर्व न्यायाधीश कुल बहादुर श्रेष्ठका ३ भाई छोरा मध्ये कल्याण श्रेष्ठ माइला छोरा हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महत्व राख्ने मुद्दा फैसला गर्ने चर्चित न्यायाधीश हुन् ।
न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका श्रेष्ठ संसदीय सुनुवाई समिति मार्फत सर्वसम्मत रुपमा चयन भएका थिए । श्रेष्ठ २०७२ चैत्र महिनासम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा बहाली रहनेछन् ।